नेपाली कांग्रेसका यी बरिष्ठ नेता एमालेमा प्रवेश !
काठमाडौँ – विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रबेश गर्नेहरुको लर्को लागेको छ । देशभरबाट विभिन्न पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु नेकपा एमाले प्रबेश गरिरहेका छन् ।
यसबीच नेपाली काङ्ग्रेसका एक स्थानीय नेता नेकपा एमालेमा प्रबेश गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्लाको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका बडा नम्बर १० का इकाई समिति सदस्य एमालेमा प्रबेश गरेका हुन् ।
इकाई सदस्य सुदर्शन पौडेल र पार्वता गौतम नेकपा एमालेमा प्रबेस गरेका हुन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० शाखा कमिटीद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी डा. राजन भट्टराईले पौडेललाई नेकपा एमालेमा स्वागत गरेका थिए।
लामो समय देखि नेपाली काङ्ग्रेसमा सकृय रहेका पौडेल भर्खरै सम्पन्न इकाइ अधिवेशनबाट सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पौडेललाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी डा. भट्टराईले नेपालको विकास र समृद्धिको बाहक नेकपा एमाले रोजेकोमा धन्यवाद दिएका थिए।पौडेलले नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल पर्यटन होटल श्रमिक संघ केन्द्रीय उपाध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन।
यो पनि – नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा लफडा देखिएको छ । माओवादी नेता नाराणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको विदेश विभाग गठनलाई लिएर असन्तुष्ट पाखेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको हो । श्रेष्ठले पार्टीले राम कार्कीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय विभाग गठनको तयारीमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभाग गठन भइनसकेको जिकिर गरे । ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विदेश विभाग गठन भएको र त्यसमा बिभिन्न व्यक्तिहरू राखिएको भन्ने समाचार गलत हो,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘पार्टीले विदेश विभाग गठन गरिसकेको छैन । यस्ता गलत सूचना प्रसारित नगर्न र त्यसको भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु ।’
जबकी माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार माओवादीले विभागमा रहने सदस्यहरूको सूची तयार गरेको र औपचारिकता दिन मात्रै बाकी रहेको जनाइएको छ ।
पार्टीको गत साउन ३० र ३१ मा केन्द्रीय समिति बैठकले राम कार्कीलाई विदेश मामिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यसै निर्णयमा श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट समेत हटेका श्रेष्ठको चाहना विदेश विभागमा छ । तर, पार्टीले अर्कै निर्णय गरेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका बताइएको छ ।
यो पनि – नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छानेको छ । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वरजंग गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।